पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल लिटरमा एकैचोटी १० रुपैयाँ बढ्यो - Aathikbazarnews.com पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल लिटरमा एकैचोटी १० रुपैयाँ बढ्यो -
पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल लिटरमा एकैचोटी १० रुपैयाँ बढ्यो
सरकारको दबावमा चुनावसम्म कुरेर बसेको नेपाल आयल निगमले अन्ततः निर्वाचन सकिएको दोस्रो दिन नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ।
निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल तीनवटै तेलमा लिटरमा एकैचोटी १०/१० रुपैयाँले मूल्‍य बढाएको छ। लिटरमा एकैचोटी १० रुपैयाँले मूल्य बढेको यो पहिलोपटक पनि हो।
यससँगै अब पेट्रोल लिटरको १७०, डिजेल/मट्टीतेल १५३ रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि पेट्रोल लिटरको १६० र डिजेल/मट्टीतेल १४३ रुपैयाँ थियो।
हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्‍य भने हाललाई यथावत नै राखेको निगमले जनाएको छ। एलपी ग्यास अहिले प्रतिसिलिन्डर १६०० रुपैयाँ छ भने हवाई इन्धन लिटरको आन्तरिकतर्फ १५६ रुपैयाँ र वाह्यतर्फ १.५४५ अमेरिकी डलर छ।
बढेको मूल्‍य शनिबार वैशाख ३१ गते राती १२:०० बजेदेखि लागू हुनेछ।
भारतीय आयल निगमले दुई साताअघि मे १ मा नै पठाएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार निगमलाई महिनामा १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ घाटा हुने स्थिति थियो। निगमले उक्त घाटा थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाउँदा जनाउँदै सरकारले चुनावी नतिजा प्रभावित हुने भन्दै ते‍लको मूल्य यथावत राख्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यसयताको दुई सातामा निगमलाई आईओसीलाई नयाँ मूल्यअनुसार भुक्तानी गर्दा करिब ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ घाटा पुगेको छ।
मे १ मा आईओसीबाट प्राप्त गरेको नयाँ खरिद लागत मूल्यअनुसार निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलमा २३.०२ रुपैयाँ र डिजेलमा ४०.१३ रुपैयाँ घाटा थियो भने मट्टितेलमा २.८१ रुपैयाँ नाफा थियो। हवाई इन्धनमा पनि निगम (आन्तरिकतर्फ रू. १२.६४ र वाह्यतर्फ रू. ६४.६९) नाफामा नै थियो। तर एलपी ग्यासमा भने प्रतिसिलिण्डर रू. १,०५०.८० रुपैयाँ घाटामा थियो। यी सबै इन्धनको लागत मूल्य र बिक्री मूल्यका आधारमा समग्रमा १५ दिनमा करिब ५ अर्ब १९ करोड घाटा हुने स्थिति देखिएको निगमले यसअघि जनाएको थियो ।
नयाँ मूल्यवृद्धि पछि पनि यो घाटा अझै ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा मात्र झरेको निगमको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित तेलको मूल्य निरन्तर बढ्दै जाँदा खरिद मूल्‍य नै उच्च भएपछि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको घाटा केही कम गर्नका लागि मूल्य बढाएको भए पनि अझै यो पर्याप्त नरहेको निगमले जनाएको छ।
१ अर्ब चूक्ता पूँजी र ५ अर्ब कारोबार गर्ने कम्पनीले आईपीओ ल्याउनुपर्ने, यस्तो छ सूची
आइएमईले भित्र्याउँछ वार्षिक एक खर्ब बढी विप्रेषण
ग्लोबल आइएमई क्यापीटलले शुरु गर्यो ‘विजनेश कन्सेप्ट टु लिसनिङ’ सेवा
माछापुच्छ्रे क्यापिटलको कार्यवाहक सीईओमा सैजु नियुक्त
जेड वर्गमा परेका ज्योति विकास बैंक र सानिमा माई हाइड्रो पूनरावलोकपछि ए वर्गमा परे
भदौदेखि दूधको मूल्य बढ्ने
बैंकहरु चैतसम्मको कर तिर्न तयार
ग्लोबल आइएमई र सेलपेबीच सहकार्य
माछापुच्छ्रे बैंकको क्युआर कोड नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिरमा, गभर्नरले कोडबाटै भेटी चढाए
लक्ष्मी बैंकको नयाँ वर्ष अफर ४.५ प्रतिशत ब्याज दर
एनआईसी एशिया क्यापिटलमा निशुल्क डिम्याट खाता